Ogaden News Agency (ONA) – Jarmalka oo Dhaqan Galinaya Sharciga Xakamaynta Nacaybka.
Jarmalka oo Dhaqan Galinaya Sharciga Xakamaynta Nacaybka.
Posted by ONA Admin	/ January 2, 2018
Dawladda Jarmalka ayaa bilaabaysa dhaqangalinta sharciga baraha bulshada ka dalbanaya in ay si deg deg ah uga saaraan hadalada nacaybka, wararka been abuurka ah iyo waxyaabaha kale ee sharcidarada ah.
Baraha aan tirin waxyaabaha “ay iska caddahay in ay sharcidaro yihiin waxaa laga yaabaa in ay wajahaan ganaax lacageed oo gaadhaya 50 milyan oo Euro. Sharcigan ayaa baraha siin doona mudo 24 saac ah si ay u tiraan waxyaabaha aan sharciga waafaqsanayn ee lasoo galiyay. Baraha bulshada iyo warbaahinnada kale ee ay ku xidhan yihiin in kabadan labo milyan ayuu sharcigani qaban doonaa.
Sharciga Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ayaa la meelmariyay dhammaadkii bishii Juunyo ee 2017kii, wuxuuna dhaqan galay horraantii bishii Oktoobar. Laakiin baraha bulshada ayaa la siiyay tan iyo dhammaadkii 2017kii si ay ugu tabaabushaystaan sharciga NetzDG.